नेपाल सरकारले किन मान्छे मात्रै विदेश पठाइरहेको छ ? विदेशमा कमाएको पैसा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन किन सक्दैन सरकार ?
Mon, Dec 09, 2019 | 17:27:49 NST
07:39 AM (6 years ago)
प्रश्न - म देश परदेश कार्यक्रम निरन्तर सुन्दै आएको छु । यो एउटा मात्र यस्तो कार्यक्रम हो जसले हामीजस्ता नेपालीको घाउमा मल्हम लगाएको छ । हाम्रो देशको राजनीतिक खिचातानिले धेरै नेपालीलाई दिनदिनै विदेश जान बाध्य बनाएको छ ।
अनि त्यहि नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले देश चलेको भनिन्छ । तर त्यो पैसा लगानी गर्ने वातावरण सरकारले किन नबनाएको ? विदेशमा बस्ने नेपालीको लगानी सुरक्षित गरि लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले सक्दैन ? मैले सुने अनुसार विदेशबाट पठाएको पैसाको ८५ प्रतिशत घर खर्चमै सकिने गरेको छ । त्यसको १५ प्रतिशत पैसा पनि सबै नेपाली लगानी गर्न सके नेपालमा भइरहेका विभिन्न प्रोजेक्टहरुमा लगानी हुन सक्थ्यो होला ।
यसमा नेपाल सरकारको धारणा के छ ? विदेश बसेर फर्केका मानिसहरुलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न सरकारले किन गर्न सक्दैन ? सरकारको काम नेपालीलाई विदेश पठाउने मात्रै हो र ? आगामी वर्षमा सरकारले यसमा ध्या दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
उत्तर : दिवस आचार्य, निर्देशक वैदेशिक रोजगार विभाग : यो निकै राम्रो धारणा हो । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट आएको पैसालाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन पहल सुरु गरेको छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग मात्र नभइ अन्य निकायबाट केही नयाँ कार्यक्रम आयो भने हामी यहाँहरुलाई जानकारी गराउने नै छौं ।
बजेटबारे काम गर्न विदेश पुगेका नेपाली : खुशीसँगै गुनासा पनि मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटका कतिपय विषय सकरात्मक भएपनि उठाउनु पर्ने कतिपय कुरा नउठाएको परदेशीले गुनासो गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट युवालाई रोक्ने सरकारका १० कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र रोजगारी गर्न विदेश जान नपर्ने गरी देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले विभिन्न कामहरु शुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्ता कामभित्र बेरोजगारको गणना गर्नेदेखि प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने सम्मका कार्यक्रम परेका छन् ।
विदेशको दुःख र पैसाको महत्व बुझेपछि फेरियो आचार्य गाउँ (भिडियाे सहित) युवा विदेश गएपनि गाउँ चाहिँ हराभरा छ । तर विदेशको कमाइले होइन । विदेश जानेका श्रीमती आमाबुवा र परिवारका सदस्यले आफैं आचार्य गाउँ हराभरा बनाएका हुन् ।
रोजगारीका लागि भारतमा जानेलाई पासपोर्ट अनिवार्य गर्नुपर्नेमा जोड काठमाडौंमा सोमबार भएको कार्यक्रममा सहभागी धेरैजसोले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले भारतको रोजगारी व्यवस्थित गर्ने घोषणा गरेपनि कुनै काम नगरेकामा खिन्नता व्यक्त गरे ।
​लगानी गर्न लगन कुर्नु पर्दैन सम्पन्न र सुखी जीवन सबैको चाहना हो । कोहीले यसलाई सपनामा मात्र सीमित राख्छन भने केहीले सुखी जीवनको आनन्द लिँदै अरुलाई पनि सुखी र खुसी बनाउन सक्षम हुन्छन । सम्पन्नता प्राप्त गर्नका लागि धेरै कुराले प्रभाव पार्दछ । ती धेरै कुराहरु मध्ये व्यक्तिको सोच र लगानीको शुरुवात पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यवसायिक लगानीको शुरुवात गर्नका लागि बचत, जोखिम र यसका आयामहरुलाई बुझ्ने क्षमताले सफलता निर्धारण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यस्ता सोचहरुलाई यहाँ केलाउने प्रयास गरिएको छ । मानिसका खर्च गर्ने व... पुरा पढ्नुहोस
कार्यक्रम देश परदेशको अंक ३०९ वित्तिय साक्षरता कक्षापछि फेरिएका परदेशीका परिवारमा केन्द्रित छ । आज भ...